Gudd. gobolka Mudug oo ka dayriyey amniga gobolka, kana digay dilalka qorshaysan. – Radio Daljir
Gudd. gobolka Mudug oo ka dayriyey amniga gobolka, kana digay dilalka qorshaysan.
Galkacyo, Mar 21 – Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad oo lahadlayay idaacadda Daljir ayaa sheegay in magalada Gaalkacyo dhawrkii maalmood ee la soo dhaafay ay ku soo badanayeen dadka falalka dilka ka gaysta magaalada gudaheeda, iyo kuwa ka ganacsada walxaha maan-dooriya ah, kuwaas oo dhibato fara badan ku haya amaanka magaalada.
Md. Salaad waxa uu sheegay in magaalada Galkacyo marka loo eego Puntland ay ka xigto koonfurta Soomaaliya, ayna xuduud la leedahay Itoobiya, sidaa darteedna mar kasta ay adag tahay in la sugo amniga magaalada oo ay dhawr jeer ka dhaceen dilal iyo qaraxyo lala eegtay dad rayid ah iyo mas’uuliyiin ka tirsan dawlada Puntland.
Md. Salaad waxaa uu ugu baaqay shacabka gobolka Mudug in ay ka feejignaadaan dadka falal-dambiyeedyada ka fuliya magaalada, gacanna siiyaan hay’adaha amniga ee dawladda.
Guddoomiyaha gobolku waxaa sidoo kale uu sheegay in dhibaatada dhinaca amniga ah ee ka taagan magaalada Galkacyo ay sabab u tahay iyada oo magaalada gudaheeda ay ka arrimiyaan labo maamul; inkasta oo sida uu sheegay xiriir wanaagsan ay la leeyihiin maamulka Galmudug ee ka arrimiya xaafada Wadajir ee koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Magaalada Gaalkacyo ayaa dhawrkii maamlmood ee la soo dhaafay waxaa ku soo cusboonaaday dilalka qorshaysan ee lagu bartilmaamsanayo indheergaradka bulshada; waxaana taasi ay abuurtay khalkhal xoogan oo dhinaca ammaanka ah.
Ciidamada bilayska ee gobolka Mudug ayaa hawlgallo amni ka fuliyey magaalada todobaadadii ugu dambeeyey, kuna qabtay dad badan oo lagu tuhmay in ay ku lug lahaayeen falal-dambiyeedyada ka dhaca magaalada.
C/wali Maxamed Sheekh